109 fiteny tohanan'ny
Miezaka manampy anao izahay amin'ny fahazoana ny vahaolana haingana
Na dia mino aza izahay fa tokony ho fanandramana tsara amin'ny fampiasana ny vahaolana tonga lafatra tsara indrindra ho anay, fa indraindray raha tsy azonao ny zavatra rehetra dia mba jereo amin'ny fanontanianay matetika etsy ambany; ary tsarovy fa eto foana izahay hanampy anao.
Fanontaniana napetraka matetika?
Voavaly eto ny fanontanianao
Azoko atao ve ny manana bandwidth tsy voafetra ho an'ny tranonkalako?
Azo antoka! Manome toky an'ity olana ity izahay.
Afaka mampiasa SSL miaraka amina sehatra manokana ve aho?
Tsia! Tsy manohana SSL izahay izao fa hanao tsy ho ela.
Eny! Vidio fotsiny ny mari-pankasitrahana SSL anao avy eo ampiasao ho an'ny fonenanao manokana.
Azoko atao ve ny manana pejy tsy voafetra ho an'ny tranokala?
Eny! Natao hamela anao hamorona pejin-tranonkala tsy manam-petra ny sehatra anay, mamorona araka izay itiavanao azy.
Afaka manampy singa vaovao amin'ny pejin-tranonkala ve aho?
Miala tsiny fa TSIA! Ny tanjonay dia ny manampy ny olona hamorona tranokala fandraharahana miaraka amina lohahevitra tranonkala natsangana ankafiziny, mila mifantina lohahevitra iray fotsiny izy ireo avy eo manomboka manangana tranokala famoronana; tsy mila mieritreritra ny fomba handaminana ireo singa hanatsarana ireo pejy izy ireo, korontana izany raha tsy manam-potoana be izy ireo.
Eny! Azonao atao izao ny mamorona tranokala avy amin'ny rangotra miaraka amin'ny Element Builder mahery.
Azoko atao ve ny misintona tranonkala noforonina feno?
Eny! Ankoatry ny famoahana ireo tranonkala noforonina ho domains / sub-domains anao manokana, na fampakaram-bola amin'ny alàlan'ny FTP, dia manohana anao koa izahay amin'ny fisintomana tranokala noforonina tanteraka.
Azoko atao ve ny manana lohahevitra tokana ho an'ny tranonkalako?
Amin'ny ankapobeny, ny mpanavotra antsika dia eny! Mila mampakatra ny lohahevitra tsy manam-paharoa ianao avy eo mametraka azy ho tsy miankina hampiasaina amin'ny tranokalanao ihany.
Ahoana ny fanovana ny lohatenin'ny pejy?
Ny lohatenin'ny pejin-tranonkala dia azo ovaina amin'ny alàlan'ny takelaka pejy ao amin'ny tranokala tsirairay amin'ny maody fanovana.
Ahoana ny fomba hanondroana ny fonenako manokana amin'ny tranokala noforonina?
Azonao atao ny manondro ny doka natokana ho an'ny Editing Mode, aorian'ny nidiranao amin'ny fonenanao manokana, tsy maintsy mandeha any amin'ny registrar domain ianao avy eo mamorona firaketana CNAME & manondro ny fonenantsika www.gomymobi.com
Azo atao ve ny manampy bilaogy amin'ny fivarotana sy tranokala?
Tsia, io vahaolana io dia tsy hamboarina atsy ho atsy. Mampiasà rafitra fitorahana bilaogy ivelany toy ny Medium dia ampio rohy bilaogy ao amin'ny tranonkalanao na fivarotana.
Raha tsy misy domains, azoko atao ve ny manana tranokala na fivarotana?
Eny! Tsotra be izany, mila mampiasa ny sub-domains-nao fotsiny izahay ho an'ny tranokalanay sy fivarotana anao. Raha vantany vao manana domains manokana ianao, ary apetranao amin'ny tranokalanao sy magazay, dia mandeha tsara ny zava-drehetra nefa tsy manimba na very.
Afaka manana fivarotana an-tserasera MAIMAIMPOANA mandrakizay ve aho?
Azo antoka! Manome anao fitaovana sy vahaolana izahay hivarotana ireo vokatra noforonina ho an'izao tontolo izao MAIMAIMPOANA. Saingy noho ny famerana ny momba ny enti-manana dia mety manana vokatra 10 fotsiny ianao miaraka amin'ny kaonty maimaimpoana.
Azoko atao ve ny mivarotra zavatra ato amin'ny tranonkalako?
Eny! Rehefa avy namorona tranokala ianao dia mila manokatra magazay ho azy fotsiny dia manomboka mivarotra izay anananao.
Ny vokatra dia tsy aseho toy ny baiko mandahatra?
Tokony ampidirinao ao amin'ny Product Settings aloha ny index order.
Ahoana no fomba hampifandraisako mivantana ny sehatra misy ahy ny fivarotana?
Miasa toy ny fampirimana ao anaty fonenana ny magazay, noho izany dia tsy azo atao ny mampiditra sehatra mba hiantsenana mivantana.
Ahoana no ahafahako manova ny habetsaky ny entana ao amin'ny pejy fizahana?
Tsy afaka manova ny habetsany fotsiny amin'ny pejin'ny sarety ianao, ny pejy fizahana dia toerana hametrahana ny baiko ihany.
Ahoana no hahitako ny kaomandy napetrakao?
Aorian'ny fametrahana ny baiko am-pahombiazana dia hitodika any amin'ny pejin-kafatra ianao handoavana & hanarahana ny baiko noforonina vao haingana, hitanao koa ity rohy ity amin'ny mailaka nalefa ho an'ireo mpiditra email.
Ahoana ny fanovana / fanovana ny rohy video amin'ny lohahevitry ny tranokala?
Ho an'ny singa manokana izay tsy afaka niova tamin'ny alàlan'ny editors na kaody loharano, tsy maintsy mamorona sehatr'asa-setings.php lohahevitra amin'ny tranonkala ianao avy eo mampiasa PHP hanodinana soatoavina niova.
Mampandrenes izany fa mila manavao ny drafiko aho?
Miala tsiny noho izany, fa ny fiasa sy vahaolana sasantsasany dia ho an'ireo mpikambana karama, azafady mba havaozy ny drafitra hampiasanao ireo fitaovana ireo. Ny drafitray dia mora vidy, mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny.
Raha mampiasa kaonty demo ianao, maro ny lafin-javatra manan-danja tsy azo atao, manandrama azafady amin'ny kaonty tena izy, MAIMAIMPOANA tanteraka ny fisoratana anarana.
Ity hafatra ity dia toa nampandre fa tapitra ny kaontinao, azafady mba havaozy hampiasa foana.
Ity hafatra ity dia toa nampitandrina fa tsy azonao atao ny mampihena ny kaontinao amin'ny drafitra ambany, satria tsy afaka manapa-kevitra ny tranonkala / fivarotana hamafa ny sehatra. Ka tsy afaka manavao ny drafitrao ankehitriny fotsiny ianao na manatsara ny drafitra avo kokoa.
Afaka mamorona drafitra misaraka momba ny tranokala sy ny fivarotana ve aho?
Miala tsiny noho izany, fa tsy misy drafitra misaraka amin'ny tranokala na fivarotana, drafitra miaraka amina tranokala sy fivarotana tohanana ihany, afaka mamono na mamono ny vahaolana amin'ny magazay ianao ary mametraka fetra ho an'ny loharanon-karena sy tranokala.
Izahay eto dia hanampy anao amin'ny fananganana tranokalan'ny orinasanao haingana, mora sy mandaitra; manome anao vahaolana tonga lafatra tsara indrindra koa hivarotana ireo vokatra noforoninao amin'izao tontolo izao miaraka amina komisiona maimaimpoana, mahazo ny tombom-barotra rehetra ianao.
Mizaha lohahevitra momba ny tranokala
Mampiasa karazana mofomamy hafa izahay hanatsarana ny zavatra niainanao tao amin'ny tranonkalantsika. Mampiasa cookies izahay hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa, ary hamakafaka ny fivezivezena amin'ny tranokala. Noho ireo antony ireo dia azonay atao ny mizara ny angon-drakitra fampiasanao tranokala amin'ny mpiara-miasa aminay. Azonao atao ny manaiky ny fampiasana ny haitao toy izany amin'ny alàlan'ny fanakatonana ity fampandrenesana ity, amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny rohy na bokotra rehetra ivelan'ity fampandrenesana ity na amin'ny alàlan'ny fitohizan'ny fizahana raha tsy izany.